Safarka Fasaxa winterka ee UngMetro – ungmetro
Safarka Fasaxa winterka ee UngMetro
how to write an outline for an essay pdf free essay writer how to write dates in english month and year
Sannad walba waxaanu qabanqaabinaa safar loo baxo fasaxa winterka oo bilaash ah. Sannadkanna waanu wadnaa! Ururka Juniorklubben wuxuu Hafjell safar fasax ugu kaxaynayaa 16 carruura muddada u dhaxaysa 25.02.-28.02. Soo dalbashada ka qayb -qaadashada safarka gaarantii u siin mayso in ilmuhu meel ka helo safarka, hadday noqoto caarruuraha Juniorklubben-ka yimaada ayaanu ka qaadan doonnaa kuwa fasaxa loo wadayo.
Waxaanu rabnaa in carruuraha oo dhami ay ka qaybqaataan cayaaraha barafka ee slalåm-ka, inkastoo ay maalintii jiraan cayaaro kale oo bannaanka ah. Waxyaabaha habeenkii lagu madaddaalan doona waxaa ka mida noocyada cayaar-shaxda(brettspill), filmaan, tartan su´aalo(quiz) iyo iska baashaal nasasho.
Aqal hoy oo wayn oo cabbirkiisu yahay 400kvm ayaanu kiraysanay, si aanu u fulino xeerarka koroonaha, qolalka waxaa loo seexan doonaa laba-laba qof, kala gaar ayay noqon doonaan qolalka wiilasha iyo gabdhaha. Aqalka hoygu wuxuu ku yaal daadegga hoose ee u dhow hoteelka. Ulaha barafka lagu dul ordo ayaa illaa aqalka hoyga hortiisa lagu iman karaa!
Mar walba dad waawayn ayaa carruurraha ka ag dhowaan doona. Waxaa jiri doona 3 illaa 4 jeer oo xilli cunto iyo waxoogaa faakiyahsyi habeenkii ah. Qalabka cayaaraha farafka waxaa soo kiraynaya UngMetro, laakiin way fiicantay in qofkii wax qalab ah haystaa uu soo sheego.
Safarka intaan loo bixin ayaa carruuraha si fiican loogu sharxi doonaa xeerarka nidaamka ee safarka, xeerarkaa oo qeexaya in aan waxna laysugu dulqaadan doonin. Ilmihii xeerarka meesha jebiya waxaa dhici karta in gurigooda dib loogu celiyo.
Qalabka Carruuruhu soo qaadanayaan: gacmo gashiga dhaxanta(voter), hoos ka gashiga dhaxanta oo dhogor ka samaysan( ullundertøy), koofiyadda dhaxanta, kabaha gudaha/dacas, dhar kugu filan, dharka gudaha, dhar hurdo, sharabaaddada dhaxanta, dharka korka laga gashado ee dhaxanta, bustaha la dhex galo ee hurdada(sovepose) isaga looma baahna. Waalidku ha soo sheego ilmihii aan qalabkan wada haysan, waxaa laga daynsan karaa UngMetro.
Warbixino dheeraada oo ku saabsan guud ahaan safarka iyo waqtiga/meesha laysugu imanayo ayaa la idiin soo diri doona ka dib marka is diiwaangelinta safarku dhamaato.
Illaa hadda waxaa noo qorshaysan in baska safarka uu ka bixi doo xarunta UngMetro saacadda 13.45 taariikh 25.02 Soo laabadkana uu xarunta UngMetro imaan doono saacadda.13.30 taariikh 28.02.
Macluumaadka safarka waxaa lagala xiriirayaa: Gaute Noem tlf: 94870495
Naga guddooma salaan fiican: Aniga Gaute ah iyo dhammaan intayada kale ee UngMetro